MARVEL Battle Lines 2.0.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.0.1 လြန္ခဲ့ေသာ 11 လက
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ MARVEL Battle Lines
MARVEL Battle Lines ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါနတ်မင်းကြီး Cube ကိုပရမ်းပတာထဲသို့အံ့ဩခြင်းဠာဇောက်ချပါဝင်လာချိုးဖဲ့ပြီးပါပြီ! အခုတော့သင် shards စုဆောင်းဝဠာ restore ရန်, သေစားသေစေသော, က Galaxy ၏ Guardians, Spider-Man နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင်စူပါသူရဲကောင်းများနှင့် villain အတူတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းရပါမည်။
Captain America, Thor, Daredevil, Venom, ဆရာဝန်ထူးဆန်းနှင့် Thanos အပါအဝင်သင်အကြိုက်ဆုံးအံ့ဩခြင်းဇာတ်ကောင်ကစားကဒ်များ 100 ကျော်စုဆောင်းပါ။ သင့်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောကုန်းပတ် Build နှင့် Single-player ကို mode မှာအရေးယူသို့ဇာတ်ကောင်ပေးပို့, ဒါမှမဟုတ်သွေးခုန်နှုန်း-pounding PVP ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ကစားသမားနှင့်အတူဦးခေါင်း-to-ခေါင်းကိုသွားပါ။ သင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာ Set များနှင့်စစ်တိုက်ဂိမ်းစုဆောင်းဒီဒဏ္ဍာရီကဒ်အတွက်အရေးယူသို့သူတို့ကိုငါစေလွှတ်မည်။
•တစ်ဦးချင်းစီဇာတ်ကောင်ပုံတူတစ်စုဆောင်းလက်ရာစေရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အနုပညာစတိုင်များအတွက် Iron Man, Black ကမုဆိုးမ, Spider-Man, Loki နှင့်ထို့ထက် ပို. အပါအဝင် 100 ကျော်စူပါသူရဲကောင်းနှင့်စူပါဗီလိန်ကတ်များစုဆောင်းပါ။
•သင့်သြဇာအရှိဆုံးအဖွဲ့ဖန်တီးရန်သင့်ကုန်းပတ် Build ။ စူပါသူရဲကောင်းများနှင့်စူပါ villain သေစားသေစေသောအနေက Galaxy ၏ Guardians, အကာကွယ်, S.H.I.E.L.D နှင့်ပိုပြီးပေါင်းစပ်!
•သင့်မဟာဗျူဟာ Set: သင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တတန်းအတွက်သုံးဖမ်းပြီးရန်သင့်ကတ်များကိုအသုံးပြုပါ။
•တစ်ခုတည်းကစားသမား mode မှာတိုက်ပွဲနှင့်အလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. PvP အတွက်ယှဉ်ပြိုင်။
ကြေညာချက်များနှင့်အဖြစ်အပျက်အသေးစိတ်ကိုတရားဝင်အံ့ဩခြင်းတိုက်ပွဲ Lines ဖိုရမ်သို့သွားရောက်ပါ
ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါသလား? https://i.nx.com/2Qj သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်
အံ့ဩခြင်းတိုက်ပွဲလိုင်းသည်အနည်းဆုံး OS ကို 4.4 / Samsung ရဲ့ Galaxy S6 သို့မဟုတ်ချောမွေ့ဂိမ်းများအတွက်ပိုကောင်းလိုအပ်သည်။ အဆိုပါဂိမ်းသည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းမကိရိယာများပေါ်တွင် crash လိမ့်မည်။
※ဒီ app in-app ဝယ်ယူမှုပေးထားပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ device ကို setting များကိုချိန်ညှိခြင်းဖြင့်ဒီ feature ကို disable နိုင်ပါတယ်။
■ App ကိုခွင့်ပြုချက်များသတင်းအချက်အလက်
"ဓါတ်ပုံများ / မီဒီယာ / ဖိုင်များ" CS ဘို့အတွက်ဂိမ်း screenshots များပူးတွဲဖွင့်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
※ optional ကိုခွင့်ပြုချက်ဂိမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်တော်မမူကြောင်းသတိပြုပါ။
▶ကို Android 6.0 သို့မဟုတ်မြင့်မားသော - က Settings> Applications> Select လုပ်ပါက App> ခွင့်ပြုချက်များ
အန်းဒရွိုက် 6.0 လက်အောက်တွင်▶ - ခွင့်ပြုချက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်မှ Update ကို OS ဗားရှင်း; Uninstall ကို app ကို
app ကိုခွင့်ပြုချက်အဘို့အခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံမပါဘူးဆိုရင်※, သငျသညျအထကျအဆငျ့မြားအားဖြင့်ခွင့်ပြုချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
MARVEL Battle Lines အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
MARVEL Battle Lines အေပၚ စတိုး ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
MARVEL Battle Lines အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
icenote8 စတိုး 2.47k 839.61k
MARVEL Battle Lines ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း MARVEL Battle Lines အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.0.1
ထုတ်လုပ်သူ NEXON Company
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://m.nexon.com/terms/305
လက်မှတ် SHA1: A9:0D:B3:C8:A2:18:7C:EB:0B:FF:44:1F:2F:B9:C6:41:54:64:63:EA
အဖွဲ့အစည်း (O): NEXON
နယ်မြေ (L): Bundang-gu
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Seongnam-si
MARVEL Battle Lines APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ